देउवा अनावश्यक मानिसहरुसहितको जम्बो टोली लिएर आज दिल्ली जाँदै – Karnalikhabar
देउवा अनावश्यक मानिसहरुसहितको जम्बो टोली लिएर आज दिल्ली जाँदै
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जम्बो टोलीसहित आजबाट भारतको औपचारिक भ्रमण जाने तयारीमा छन् । यसअघि नै भारत जान हतारिएका देउवालाई आज मात्रै सारित जुरेको हो ।
आफ्ना नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार, व्यवसायी, विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीसहित ५० सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै उनी दिउँसो नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन् । नभई नहुने केही प्रतिनिधिहरु लिएर जाँदा पनि हुनेमा देउवा पूरानै शक्तिमा ठूलो टोली लिएर जान लागेको हुन् । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएपछिको यो उनको पहिलो भारत भ्रमण हो ।
तीन दिने भ्रमणका लागि भारत भ्रमणमा जान लागेका देउवाले आफ्नो भ्रमणका एजेण्डाहरु सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर कतै देउवाले फेरि पनि महाकाली सन्धी जस्तो कुनै विवादास्पद र असमान सन्धी सम्झौता गरिदिएर आउने हो कि ? भन्ने कुराले पनि नेपालीहरु चिन्तित छन् ।
भारत बसाइको क्रममा देउवाले द्विपक्षीय हित, सहयोग अभिवृद्धि लगायतका विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतसँग मुख्य समस्याको रुपमा रहेको सीमा विवाद, चर्को व्यापार घाटा छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले १९ गते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । सोही अवसरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले जनकपुर जयनगर रेल सेवाको संयुक्त रुपमा उदघाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
अघिल्लो - कतार विश्वकपमा प्रयोग हुने ‘बल’मा इतिहासकै छिटो गुड्ने क्षमता !
विद्युतीकरणमा करोडौंको भ्रष्टाचार - पछिल्लो